भारतीय नेतालाई खुलामञ्चबाट प्रचण्डको प्रश्न : नाकाबन्दी किन गरेको ? | Hakahaki
भारतीय नेतालाई खुलामञ्चबाट प्रचण्डको प्रश्न : नाकाबन्दी किन गरेको ?
नेपाल र भारतवीचको सम्बन्ध ‘बडेभाइ र छोटेभाइ’ को नभई समान : भाकपा नेता जोगेन्द्र
बीजेपी नेता कोशियारीले नेपाल ज्ञानभूमि रहेको र यहाँबाट विचार र विज्ञानको विकास होस् भने । हुन पनि विपक्षी दलका नेतासँग गर्ने व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने भारतीय नेताहरुले काठमाडौंबाट सिकेकै हुनुपर्छ । यो दृश्य हेर्दा भारतभन्दा राजनीतिक संस्कारमा नेपाल अगाडि रहेको भारतीय नेताहरुले अनुभूति गरेकै हुनुपर्छ । अनलाइनखबरमा ‘अनलाइनखबर टिप्पणी’ छ । Prachanda को Speech भिडियो हेर्न HEAD को youtube Link मा Click गर्नुहोस् ।